Ny Galaxy Xcover FieldPro dia finday tena mahatohitra vaovao avy amin'ny Samsung | Androidsis
Samsung dia nanambara ny famoahana ny Galaxy XCover FieldPro, telefaona ho an'ny toe-javatra isan-karazany izay ilantsika fanoherana faran'izay betsaka. Finday iray izay miavaka amin'ireo bokotra ara-batana ireo handraisana antso, hanao azy ireo ary hifindra amin'ny finday.
Finday natao mikendry ny tanjaka sy ny faharetana ary izy io dia natao ho an'ireo matihanina rehetra izay ao anatin'ny tontolo "henjana" na matetika dia mavesatra ny fepetra. Miresaka momba ny matihanina toa ny masoivohom-panjakana isika, toa an'ireo natokana ho an'ny fitaterana na koa eny an-tsaha.
Azontsika atao ny mampiavaka azy ny Galaxy XCover FieldPro Mari-pankasitrahana MIL-STD810G sy IP68 ary mamela azy hiaina saika ny zava-drehetra toy ny fianjerana, fikorontanana ary karazan-tsetsetra hafa koa ny hafanana be, orana, vovoka na koa milentika hatramin'ny antsasak'adiny amin'ny halalin'ny 1,5m.
Misy koa a 4.500mAh bateria azo esorina ary POGO mamaly pin. Na dia ao anaty boaty aza dia hahita bateria fanampiny ianao hanoloana ilay reraka raha mila izany ianao. Mikasika ny bokotra, izy dia natokana ho an'ny "push to talk" sy ny bokotra vonjy maika izay mety ho voapetraka handefasana ny toerana na fanairana. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny tarika 14 ho an'ny fifandraisana maika.
La Sehatra fiarovana Samsung Knox dia ny CJIS, HIPAA ary ny participle ary voamarina koa izy io hampiasain'ny governemanta mifototra amin'ny fenitry ny firenena toa an'i Etazonia. Ireto ny andinindininy:
5,1 ″ efijery QHD.
Fanohanana ny LTE Cat.11 3CA
Fahatsiarovana ny 4GB + 64GB anatiny camin'ny microSD hatramin'ny 512GB
12MP AF (aperture roa) + fakan-tsary 8MP aoriana, flash LED telo heny
seranan-tsambo USB karazana-C, 3.5pi Audio, Pin Pogo
Sensors: hafainganam-pandeha, sensor ho an'ny dian-tànana, gyroscope, geomagnetic, akaiky ary sensor RGB.
Fifandraisana tsy misy tariby: Bluetooth 5.0, NFC; Wi-FI (802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5GHz, VHT80 MU-MIMO, 1024-QAM)
Refy sy lanjany: 158,5 x 80,7 x 14,2 mm sy 256 grama.
Un terminal maharitra mahatohitra antsoina hoe Galaxy XCover FieldPro ary izany dia natokana ho an'ny matihanina sy mpampiasa izay mila lafin-javatra sasany mifandraika amin'ny hamafin'ny sy fanoherana. Ankehitriny dia mila mahafantatra ny fitsapana fanoherana isika toy ny nitranga tamin'ny terminal hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ity ny Samsung Galaxy XCover FieldPro ho an'ireo izay mitady finday mahatohitra
Spotify Kids, mandefa mozika ho an'ny ankizy kely ao an-trano